ဘာကြောင့် အစာရှောင်ဆုတောင်းကြရသနည်း | Why We Fast | Real Conversion
၂၀၁၂၊ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ ၇ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်း အသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြား သောဒေသနာတော်၊
ကျေးဇူးပြု၍ ဟေရှာယ ၅၈း၆ ကို ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ မတ်တပ်ရပ်လျက် အတူတကွ ဖတ်ကြားကြပါစို့၊
“ငါနှစ်သက်သောအစာရှောင်ခြင်းဟူမူကား၊မတရားသောအချုပ် အနှောင်ကိုချွတ်ခြင်း၊ လေးသောဝန်ကိုချခြင်း၊ ညှင်းဆဲခံရသော သူတို့ကိုလွှတ်ခြင်း၊ ထမ်းပိုးရှိသမျှကို ချိုးခြင်းမဟုတ်လော့” (ဟေရှာယ ၅၈း၆)။
ထိုခေတ်အခါ၌ အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသောအခါ မည်သည့်အစာအဟာရကိုမျှ မသုံးဆောင်ကြပဲ ဆုတောင်းပဌနာပြုခြင်းကို ခေါ်ပါသည်။ အရှေ့ကကျမ်းပိုဒ် ဖတ်ကြည့် သော် သူ၏လူတို့အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို ဘုရားသခင်ငြင်းပယ်တော်မူကြောင်း ဟေရှာယအား မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို ဘုရားသခင်ငြင်းပယ် တော်မူခြင်းကား မဟုတ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ မည်ကဲ့သို့ အစာရှောင်ဆုတောင်း ရမည်ကို ပုံဥပမာများစွာ ပေးထားပြီးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း လူတို့သည် မှားယွင်း သောရည်ရွည်ချက်တို့ဖြင့် အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုသူတို့ သည် အပြင်သဏ္ဍန်လူမြင်ကောင်းရုံ အစာရှောင်ဆုတောင်းကြလေ့ရှိပါသည်။ ထိုသူတို့က မိမိတို့သည် မည်ကဲ့သို့ ထူးခြားစွာဆုတောင်းခဲ့ကြကြောင်း ဂုဏ်ဖေါ်ဝါကြွားခဲ့ ကြသေးသည်။ ထိုသူတို့သည် အခြားသောသူတို့အား မည်ကဲ့သို့ သနားကြင်နာ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပေးရေမည်ကိုကား လျစ်လှူရှုထားကြပါသည်။ ထိုသူတို့သည် အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်းကို ဘာသာတရားကျင့်ထုံးအတိုင်းသာ ပြုတတ်ကြပါသည်။ ထိုသူတို့က မိမိတို့ အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသောအခါ ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့၊ မထိတွေ့သည် မဆင်ခြင်ကြပေ။
ထိုကဲ့သို့ အပြင်သဏ္ဍာန် ဆုတောင်းကြသောသူတို့အား ယေရှုဘုရားက သမ္မာ ကျမ်းစာ၌ သတိပေးခဲ့ပါသည်။ ခရစ်တော် မိန့်တော်မူသည်ကားယ
“သင်တို့သည် အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကိုကျင့်သောအခါ လျှို့ဝှက်သော သူတို့နည်းတူ မျက်နှာညိုးငယ်ခြင်း မရှိကြနှင့်၊ ထိုသူတို့သည် မိမိတို့ အစာရှောင်သည်ကို လူများတို့ရှေ့မှာ ထင်ရှားစေခြင်းငှါ မိမိတို့မျက်နှာ ကိုဖျက်တတ်ကြ၏” (မဿဲ ၆း၁၆)။
ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အစာရှောင်ခြင်းအား လူများတို့ရှေ့မှာ ထင်ရှားစေသော ကြောင့် ထိုသူတို့သည် မိမိတို့ “အကျိုး”ကို ခံရကြပြီဖြစ်သည်။ အစာရှောင်ဆုတောင်းကြ သောအခါ၊ အအဖဘုရားသခင် ထံတော်ပါးက အကျိုးကျေးဇူးကို မမျှော်လင့်ခဲ့ကြပေ။ ထိုသူတို့သည် လူများတို့၏အမြင်၌ မိမိတို့သည် ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းသူများ ဖြစ်သည်ဟု ထင်ရှားလိုကြပါသည်။
သို့သော် ခရစ်တော်ဘုရားက အစာရှောင်ခြင်းအား အပြစ်တင်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်တော်က တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူရာတွင်”အစာရှောင်ခြင်းအကျင့်ကို ကျင့်သောအခါç လျှိုဝှက်သောသူတို့နည်းတူ မပြုကြနှင့်---” ဟူ၍ မိန့်တော်မူခဲ့ ပါသည်။ တဖန် ယေရှုကယ
“ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား ထိုသူတို့သည် မိမိတို့အကျိုးကို ခံရကြ၏။သင်သည်အစာရှောင်သောအခါ၊အစာရှောင်သည်ကို လူများတို့ရှေ့မှာ မထင်ရှားစေဘဲ မထင်ရှားသောအရပ်၌ ရှိတော် မူသော သင်တို့အဘရှေ့တော်၌ ထင်ရှားစေခြင်းငှာ ခေါင်းကို လိမ်းကျံလော့။ မျက်နှာကိုလည်း သစ်လော့။မထင်ရှားသောအ ရာကိုမြင်တော်မူသော သင်တို့ အဘသည် အကျိုးကို ထင်ရှားစွာ ပေးတော်မူလတ္တံ။” (ရှင်မဿဲ ၆း၁၇-၁၈)။
ခရစ်တော်ဘုရားက အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို အပြစ်တင်၍ ပြောဆိုနေခြင်း မဟုတ်ပါ။ “သင်အစာရှောင်ခြင်းအကျင့် ကျင့်သောအခါ “။”သင်အစာရှောင်ခြင်းအကျင့် ကျင့်သောအခါ “ မည်ကဲ့သို့ ပြုမူကျင့်ကြံရမည်ကို မိန့်တော်မူပြီးဖြစ်ပါသည်။ စစ်မှန် သော ခရစ်ယာန်ယုံကြည်တို့သည် ခရစ်တော်ဘုရားနှင့် အခိုင်အမာ ဆက်နွယ်လျက် ရှိပါသည်။ စစ်မှန်သောအစာရှောင်ခြင်းသည် လွတ်လပ်စွာဘုရားသခင်ထံ အာရုံပြုလျက် ဆုတောင်းသင့်ပါသည်။ မိမိတို့ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းကို ဂုဏ်ယူဝါကြွားရန် မသင့်ပေဍ
အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အသင်းတော်အများတို့သည် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်း အကြောင်းကို အနည်းအကျဉ်းသာ နားလည်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်လည်း တောင်ဘက်ခြမ်း နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၏ အသင်းသားဖြစ်စဉ်တုန်းက ၆နှစ်လုံးလုံး အစာရှောင်ခြင်း အကြောင်းကို တစ်ခါတစ်လေတောင်မှ မကြားခဲ့ရပါ။ တရုတ်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်သို့ ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိသောအခါတွင် အသစ်အဆန်းပမာ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်း ကို ပထမအကြိမ် ကြားခဲ့ရပါသည်။ကျွန်ုပ်၏လက်ဦးဝိညာဉ်ဖခင်ကြီး ဒေါက်တာလင်းက အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းကို မကြာခဏ ပြောပြခဲ့ပါသည်။ အချို့သော အသင်းတော်၌ အသင်းသူ^အသင်းသားတို့ အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသောကြောင့် အသင်းတော်သည် တစ်နေ့တစ်ခြား နိုးကြားလျှက် ကြီးထွားလာပါသည်။ တရုတ် နိုင်ငံ၌ရှိသော အိမ်အသင်းတော်တို့သည် အစဉ်အမြဲဆုတောင်းကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိကြားခဲ့ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ အစဉ် အစာရှောင်ဆုတောင်းကြသောကြောင့် တရုတ်ပြည် သူ့သမ္မတနိုင်ငံရှိ အိမ်အသင်းတော်တို့သည် တန်ခိုးကြီးsလျက်၊ အစဉ်နိုးကြား လျက်ရှိသည်ဟု ကျွုန်ုပ် ယုံကြည်ပါသည်။ ယနေ့တွင် သန်းနှင့်ချီသောလူတို့သည် တရုတ်နိုင်ငံ၌ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန် ဖြစ်နေကြပါသည်။ ထိုသို့ ကြီးမားသောဝိညာဉ် နိုးထမှုဖြစ်လာရခြင်းသည် ထိုသူတို့၏ အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းအသံကို ဘုရားသခင် နားညောင်းတော်မူ၍ ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ် သဘောပေါပေါက်သည်။ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပထမကနဦး သာသနာပြုဆရာကြီး ဟုတ်ဆန်တေလာ ပြောကြားခဲသည်မှာ၊
ဆန်ဆီမြို့၌ရှိသော တရုတ်ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တို့သည် အစာရှောင် ဆုတောင်းခြင်းကို ပုံမှန်အလေ့အကျင့်အဖြစ် သတ်မှတ်၍ ကျင့်ကြ၏ ထိုသူတို့ အသိအမှတ်ပြု ပြောပြသည်မှာ အစာရှောင်ခြင်း ဟူသည် နှစ်မြို့ဖွယ်တော့မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် ဘုရားသခင်၌ ယုံကြည်ခြင်း တောင်းဆိုသောအရာဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းအားနည်းစေသည်။ ထိုသို့ အစာရှောင်ကျင့်ခြင်းသည်ကား ဘုရားသခင်၌ ကြီးမားသော ကျေးဇူးကို ခံစားစေခြင်းဖြစ်သည်။
ဆုတောင်းခြင်းသည် အန္ဒြူးမူရေး ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်တာတစ်ခုလုံးကို ဆက်ကပ်အပ်နှံရန် အဆင်သင့် ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုမျှမက ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းခဲ့သမျှကိုလည်း လက်တွေ့ခံစားရန်နှင့် နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြစ်သည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများဖြစ်ကြသော လုသာယ ကယ်လ်ဗင်နှင့် နောဒ်တို့ လည်း မကြာခဏ အစာရှောင်ဆုတောင်းကြပါသည်။ ကနဦး မက်သဒက်တရားဟော ဆရာတို့သည် အပတ်တိုင်း တစ်ပါတ်လျှင်နှစ်ရက် အစာရှောင်ဆုတောင်းကြဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ကြပါသည်။ ကျွုန်ုပ်တို့နှစ်ခြင်း ယုံကြည်ခြင်းဖခင်ကြီး ဂျွန်ဘန်ယန်လည်း တရားမဟောခင် အမြဲအစာရှောင်ခဲ့ပါသည်။ ကနဦးအိန္ဒိယ အမေရိကန်လူမျိုး သာသနာပြု ဆရာကြီး ဒေးဝိဒ်ဘရိန်းနားပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ဤမျက်မှောက်ကာလတွင် လျှို့ဝှက်စွာအစာရှောင်ဆုတောင်းပြီး ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းကို ဝေငှသင့်သည်ဟု ယူဆပါသည်။
ဘရိန်းနားက မိမိသည် အိန္ဒိယလူမျိုးများကြား သတင်းကောင်းဟောကြားရတွင် အံ့ဩဖွယ်နိုးထမှုရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းခြင်းကြောင့် ထူးဆန်းသော အဖြစ် အပျက် သုံးခုကို မျက်မြင်သက်သော ကျွန်ုပ်၌ များစွာရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုသုံးခုအနက် နှစ်ခုသည် အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ဝိညာဉ်နိုးထမှု ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်ကို မှတ် သားဖွယ် တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် ဝိညာဉ်နိုးထမှုသည်လည်း ထိုကဲ့သို့နည်းလမ်း ဖြင့် ဖြစ်ပျက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြီးမားသော နိုးထမှုခေါင်းဆောင်ကြီး ဂျွန်ဝိစလီ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
မည်သည့်နေ့ရက်၌ အစာရှောင်ဆုတောင်းမည်ကို သင်သတ်မှတ်ထား ပြီးပြီလား ကျေးဇူးပလ္လင်တော်မှ သနားခြင်းဂရုဏာတော်သည် ထိုအခါ သွန်းလောင်းတော် မူမည်ဖြစ်သည်။
ဝီစလီသည်လည်း ဝိညာဉ်နိုးထမှုကာလ၌ တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ရက် နှစ်ကာလ ကြာရှည်စွာ အစာရှောင်ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်သွေ့ခြောက်သော အသင်းတော်ကာလ၊ ကမ္ဘာ့အနောက် ဘက်ခြမ်း အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အသက်ရှင်ရကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသင်း တော်သည် ကြိုးစားရုန်းကန်ကြရပါသည်။ သန်းနဲ့ချီသော လူတို့သည်လည်း အသင်းတော်ကို စွန့်ခွါခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ မြောက်များစွာသောလူတို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ သို့၎င်း၊ အရှေ့တိုင်းဘာသာတရားတို့ အသီးသီးနောက်သို့၎င်း အခြားမှားယွင်းသော ဘာသာတရားနောက်သို့ လိုက်လျှောက်ကြရပြီဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခွဲတုန်းက သမ္မတအိုဘားမား သမ္မတအဖွင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင် အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ခရစ်ယာန်နိုင်ငံ ဖြစ်လာတော့မည်မဟုတ်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ သူပြောသမျှ စကားအတိုင်းပင်လျှင် အရာရာသည် ပျက်စီးဆုတ်ယုတ်လျက် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
မည်သို့ကြောင့် ထိုကဲ့သို့ဖြစ်လာနည်း၊ ထိုသို့ဖြစ်လာရခြင်းကား အမေရိကန်ုနိုင်ငံ ၌ရှိသော သင်းအုပ်ဆရာတို့သည် လောကီဆန် လုပ်ဆောင်နေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောသင်းအုပ်တို့သည် လောကီဆန်သော ဂီတတူရိယာကို အသင်းတော်၌ အသုံး ပြုနေကြပြီဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် ရှေ့ခေတ်တရားဟောဆရာတွေကဲ့သို့ မှန်ကန်သော တရားဒေသနာကို မဟောကြားတော့ဘဲ ရှည်လျားပြီးဦးတည်ချက်များသော ကျန် တစ်ပိုဒ်ပြီးတစ်ပိုဒ် “အနက်ကိုဖော်ပြဟောနည်း” ကိုသာ ဟောကြားလေ့ရှိပါသည်။ အများသောအသင်းတော် သင်းအုပ်ဆရာတို့သည် တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ဝတ်ပြုခြင်းအစီ အစဉ်ကို ပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့သည် ဆုတောင်းခြင်းကိုလည်း လက်လျှော့ ခဲ့ကြပြီး အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ ဆုတောင်းခြင်းနှင့် ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းမှလည်း လှည့်ပြန်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ကနဦးဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းလည်း ပျောက်လုနီးပါးဖြစ်နေပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုသူတို့က အသင်းတော်၌လာသေသူတို့ကို ပင်လယ်ကမ်းစပ် အပန်းဖြေခရီး သွာ့းရာ၌ ဝတ်ဆင်သောအဝတ်အစားကို အသင်းတော်၌ ဝတ်စားဆင်ယင်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့ ကြသည်။ ဒရမ် စိတ်ကိုနှိုးဆွသောဂီတ သံစဉ်နှင့်အကတို့ဖြင့် တီးမှုတ်ကပြဖျော်ဖြေပြီး ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးကို ကျင်းပကြပါသည်။ မြောက်များစွာသော တရားဟော ဆရာတို့ သည် လူတို့အား မည်ကဲ့သို့ အသက်တာပြောင်းလဲနိုင်အောင် ဦးဆောင်ရမည်ကို မသိကြချေ။ ထိုသူတို့၏ တစ်ခုတည်းသော အသင်းတော်တိုးပွားဖို့ လုပ်ဆောင်သောနည်း လမ်းသည် တစ်ဖက်အသင်းတော်ရှိလူတို့အား စွဲဆောင်ပြီး မိမိတို့အသင်းတော်သို့ ပါဝင် စေခြင်းဖြင့် တိုးပွားစေကြသည်။ ထိုသူတို့က အခြားသောအသင်းတော်ရှိ “သိုးများ ခိုးယူပြီး မိမိတို့အသင်းတော်၌ အသင်းသားတိုးစေသည့် နည်းလမ်းကိုသာ အသုံးပြုကြ ပါသည်။
ဒေါက်တာ အေ.ဒဗလျူတိုဇာကို “နှစ်ဆယ်ရာစုပရောဖက်” ဟူ၍ သူသက်ရှိ ထင်ရှားစဉ်က ခေါ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဒေါက်တာတိုဇာ၏ ပြောစကားသည် ယနေ့ ခေတ်အတွက် အမှန်တွေပင်ဖြစ်၏။ သူပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ဘာသာရေးအပေါ်ယံသမားဟူ၍ သိသာထင်ရှားသည်မှာ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိ၊ ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူများကိုလည်း ပျော့တွဲကျစေသည်။ အသိပညာအားဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါး၏။ လေးလံထိုင်းမှိုင်းစေ၏။ အခြားသောသူတို့ကိုလည်း ထပ်ခါတလဲလဲ ငြီးငွေ့စေသည်။ ဤသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဘိုးဘေးတို့၏ ယုံကြည်ရာမှတဆင့် ဆင်းသက်လာခြင်း ဖြစ်ပြီး ဟကလေးငယ်များအား အရသာကင်းသောအစာကို တိုက်ကျွေး ရာမှ လူငယ်လူရွယ်တို့အားလည်း အရသာကောင်း၊ ဟင်းလျာပမာ ဤလောကအရာတို့မှ သေစေသောအဆိပ်အတောက်တို့ဖြင့် လွှမ်းခြုံထား ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းက လူတစ်ဦးတစ်ယောက်အား ကောင်းရာသို့ သွန်သင်ဖို့ထက်၊ ဖျော်ဖြေဖို့ရန် သာ၍လွယ်ကူစေ၏။ ၎င်းက လူတစ်ဦး တစ်ယောက်အား စဉ်းစားတွေခေါ်ဖို့ထက် ပို၍အခြေအနေကို ဆိုးဝါးစေ ပါသည်။ ထို့ကြောင့် များပြားလှစေသော နလညေါနူငခal ခေါင်းဆောင်တို့ သည် မိမိတို့၏ဘာသာရေးအပေါ် နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအား လူထုတို့ကို လျင်မြန်စွာ သိချင်စုံစမ်းချင်သော စိတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်လေ တော့၏။ A.W Tozer .D.D, “We need Sanctified Thinkers,” The Set of the Sail, Christian Publication, 1986, pp. 67, 68).
ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်များတို့၌ ဝိညဉ်နိုးထမှုရှိစေရန်f ခြောက်သွေ့သော ဖုန်မှုန့်ပမာ တရားဟောဆရာတို့၏ ကျမ်းတစ်ပိုဒ်ချင်းစီ အနက်ဖွင့်သောတရားဒေသနာ ထက် သာလွန်ပေးဆပ်မှုရှိရမည်။ ယနေ့ခေတ်ပြိုင်အနက်ဖွင့်ကျမ်းတို့ထက် နက်နဲသော အနှစ်သာရ ရှိရပါမည်။ လူငယ်တို့အား ခရစ်တော်နောက်လိုက်တပည့်ဖြစ်အောင် ဆွဲဆောင်မှုမရှိသော “ပျော့တွဲကျစေသောခရစ်ယာန်” တို့ထက်လွန်သော ပေးဆပ်မှုရှိ့ ရပါမည်။
ထိုကဲ့သို့ မိမိတို့ကို မိမိတို့ မေးမြန်းစစ်ဆေးကြည့်သော် မျက်မှောက်ခောတ် လူငယ်လူရွယ်တို့အား မည်သို့ထိရောက်သော ဆွဲဆောင်မှုဖြင့် အသင်းတော်သို့ ဆွဲခေါ်နိုင်မည်ကို သိလာမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တို့အဖို့ ပြင်းထန်သော စိတ်ဆန္ဒဖြင့် ဆုတောင်းပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ပါဝင်ပါတ်သက်မှု မရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့လူငယ်မောင်မယ်တို့အား အသင်းတော်သို့ မဆွဲခေါ်နိုင်ကြောင်း သိလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထာ၀ရဘုရားသည် ဇာခရိအား မိန့်တော်မူသည်ကား ၊
“ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ဇေရုဗဗေလသို့ ရောက်လာသော ထာ၀ရဘုရား၏ နှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကား၊ ဤအမှုသည် ဗိုလ်ခြေအားဖြင့်မဟုတ်၊ အာဏာ တန်ခိုးအားဖြင့်မဟုတ်၊ ငါ့ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူ၏”(ဇာခရိ ၄း၆)
လူငယ်မောင်မယ်တို့အား ခရစ်တော်ထံ ခေါ်ဆောင်နိုင်ဖို့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းသည် “ငါ့ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူပါသည်။”
တပည့်တော်တို့က ခရစ်တော်အား “မည်သူသည် ကယ်တင်ခြင်းရကြမည်နည်း”၊ ဟု မေးလျှောက်ကြသောအခါ ၊
“ထိုသူတို့သည် သာ၍ မိန်းမောတွေဝေခြင်းရှိ၍ သို့ဖြစ်လျှင် အဘယ်သူသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်နိုင်မည်နည်းဟု အချင်းချင်းပြောဆိုကြ၏။ ယေရှုသည်လည်း သူတို့ကိုကြည့်ရှု၍ ဤအမှုကိုလူမတတ်နိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင် မတတ်နိုင် သည်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်သည် ခပ်သိမ်းသော အမှုတို့ ကို တတ်နိုင်တော်မူသည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ “ (မာကု ၁ဝး၂၆-၂၇)
ထိုသို့လုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေဍ နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာဖြင့် ငယ်ရွယ်သော တိုင်းနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်သူတို့အား၎င်း၊ လူငယ်မောင်မယ်တို့အား ဆွဲဆောင်ပါလေ “လူသားဇာတိ သဘောအားဖြင့် မည်သူမျှမတတ်နိုင်ပါ။” ထိုသို့ စီစဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါဍ မည်သို့သောတရားဒေသနာကောင်းအားဖြင့်လည်း မတတ်နိုင်ကြပါ။ “အဘယ်သူသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်နိုင်မည်နည်း။” “လူသားဇာတိ သဘောအားဖြင့် မည်သူမျှ မတတ်နိုင်ကြပါ။” ဖြစ်နိုင်ချေလုံး၀မရှိ” ဟူ၍ ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခြင်း မဟုတ်ပါ။ လုံး၀၊ လုံး၀မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်တော်မိန့်တော် မူသည်မှာ “လုံး၀ဖြစ်နိုင်ပါ သည်။” ဘုရားသခင် တစ်ဆူတည်း တတ်နိုင်တော်မူသည်ဍ “လူသားဇာတိ အားဖြင့် မတတ်နိုင်ပါ၊ သို့သော် ဘုရားသခင် တတ်နိုင်တော်မူသည်။”။
“ကောင်းကင်တမန်ကလည်း၊ ဇေရုဗဗေလသို့ ရောက်လာသော ထာ၀ရဘုရား ၏နှုတ်ကပတ်တော်ဟူမူကား၊ ဤအမှုသည် ဗိုလ်ခြေအားဖြင့်မဟုတ်၊ အာဏာ တန်ခိုးအားဖြင့်မဟုတ်၊ ငါ့ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကောင်းကင် ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူ၏” (ဇာခရိ ၄း၆)
ဤကျမ်းတွင် ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အစာရှောင်ကြရသည်ကို ထာ၀ရဘုရား မိန့်တော်မူပါသည်။
၃။	ညှင်းဆဲခြင်းခံရသောသူတို့ကိုလွတ်ခြင်း၊ ထမ်းပိုးရှိသမျှတို့ကို ချိုးခြင်း ဟူ၍ မိန့်တော်မူပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရသောသူတစ်ဦးအနေဖြင့် ဒီကနေ့ ဝတ်ပြုအစည်း အဝေး၌ ပါဝင်သူဖြစ်မည်ဆိုလျှင် မနေ့က သင့်အဖို့ လူငယ်မြောက်များစွာ တို့ ဤနေရာ၌ အစာရှောင်ဆုတောင်းပေးကြသည်ကို သင့်အား သိစေလိုပါသည်။ မည်သူ မည်ဝါအတွက်ဟူ၍ နာမည်ခေါ်ခြင်းဖြင့် ဆုတောင်းပေးခြင်းတော့မဟုတ်ပါ။သို့သော် များစွာသောလူတို့အဖို့ အစာရှောင်လျက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသူတို့သည် အစာအဟာရကို တစ်နေ့လုံးမသုံးဆောင်ဘဲ မနေ့ည ညနေဝတ်ပြုအစည်းအဝေး အပြီး၌ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ သုံးဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် သင့်အဖို့ အစာရှောင်လျက် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြသနည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူတို့က သင့်အား ကိုယ်ချင်းစာ ၍ ဖြစ်ပါသည်။ သင့်အား အပြစ်၏ချည်နှောင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေလိုပါသည်။ သင့်အား စာတန်မာရ်နတ်၏ညှင်းဆဲခြင်းမှလည်းကောင်း၊ လေးသောထမ်းပိုးမှ လည်း ကောင်း လွှတ်မြောက်စေလိုပါသည်။ မနေ့ကတစ်နေ့လုံး သင့်အဖို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ ကြသည်အကြောင်းမှာ အပြစ်ငရဲမှလွတ်မြောက်ပြီး အသင်းတော်နှင့် မိတ်သဟာရရှိ စေရန်၎င်း၊ ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ထံတိုးဝင်လျက် အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်စင် ရန်လည်းကောင်း၊ ဆုတောင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ လောဘာတီဂျူနီဗာဆီတီက ဒေါက်တာ အီလ်မာ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
သင်အစာရှောင်ဆုတောင်းသောအခါ တပါးသူတို့အဖို့ ကောင်းကြီးတံခါးကို ဖွင့်လှစ်ပေးရန် ဘုရားသခင်ထံ သင်တောင်းလျှောက်နိုင်ပါသည်။ အပြစ်သားတို့ အား ယေရှုခရစ်တော်ထံ ပို့ဆောင်ရန် ကောင်းကင်တံခါးကို ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ ဘုရား သခင်ရွှေနားတော်သို့ တောက်လျှောက်အော်ဟစ်ဆုတောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (Elmer L. Towns, D.Min., The Beginner's Guide to Fasting, Regal, 2001, p. 124).
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးက သင့်အဖို့ မနေ့က အထူးဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါ သည်။ ခရစ်တော်မပါရှိဘဲ သင့်အသက်တာသည် အဓိပ္ပါယ်မဲ့ဖြစ်နေသည်ကို သိမြင်နိုင်ရန် ထိုသူတို့က ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်မိသားစုများနှင့် နွေးထွေးသောဆက်ဆံမှုရှိစေရန် သင့်အဖို့ ဘုရား သခင်ထံ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ သင့်ဘ၀အသက်တာထဲ ခရစ်တော် အမှန်တကယ်လိုအပ်ကြောင်း သင်သိနားလည်စေရန် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်း ပေးခဲ့ကြပါသည်။ သင်အပြစ်ရှိသမျှအဖို့ ခရစ်တော်ဘုရား လက်ဝါးကားတိုင် ထက် အသွေးတော်သွန်းလောင်းပေးခဲ့ပြီး သင့်အပြစ်အခအဖို့ ကိုယ်စားပေး ဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သင်သည် ယခုတွင် သန်ရှင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားသခင် သင့်အား ဖော်ပြတော်မူပါရန် ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ ယေရှု သည် အထက်ကောင်းကင်ဘုံတွင် ထာ၀ရအသက်ရှင်လျက်ရှိနေကြောင်း ဘုရား သခင်သင့်အား ပြသတော်မူပါရန် ဆုတောင်းပေးပါသည်။ သင်သည် အသက် တာပြောင်းလဲပြီး ထာ၀ရအသက်ရရှိဖို့ရန်လည်းကောင်း၊ အသင်းတော်၌ မိတ်သ ဟာရ ရှိရန်သော်လည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်ဘုရားခင်ထံတော်သို့ တိုးဝင်ချည်းကပ် နိုင်ပါမည်အကြောင်း ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းပေးပါသည်။ သင့်အတွက် ဆု တောင်းပေးခြင်းကို ဖော်ပြသော ဓမ္မသီချင်းကို ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာ ဂရိဖက်စ်က သီကျူးပေးပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည် မယုံကြည်သူမိတ်ဆွေတို့ ကယ်တင်ခြင်းအဖို့ ဆုတောင်းပေးသူ ဖြစ်သော် ထိုဓမ္မသံပြိုင်ကို သီဆိုကြပါစို့ဍ
(၁၈၃၇-၁၉၁၀၊ အက်စ်အိုမော်လေးကလောက်ဒ် သီကုံးရေးသားသော
“ သင့်အဖို့ ကျွုန်ုပ်ဆုတောင်း” ကျူး)။
-	တရားဒေသနာမတိုင်ခင်၊ ဒေါက်တာဂရိတ်တန်အယ်လ်ချန်မှ ရှင်မဿဲ ၆း၁၆-၁၈ ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
- တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်ဖ်မှ (၁၈၃၇- ၁၉၁၀ ခုနှစ်၊ အက်စ်၊အိုမော်လေးကလောက်ဒ် သီကုံးရေးသားသော “ သင့်အဖို့ ကျွုန်ုပ်ဆုတောင်း” ဟူသော ဓမ္မသီချင်းကို သီဆိုပေးပါသည်။